Mampiroborobo ny fizahan-tany any Karaiba na eo aza ny loza voajanahary farany teo
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Mampiroborobo ny fizahan-tany any Karaiba na eo aza ny loza voajanahary farany teo
Septambra 30, 2017
Ezaka iray iarahan'ny mpandraharaha mpizahatany avy any Guyana sy Trinidad no mitady hisarika ny mpizahatany ho any amin'ny faritra Karaiba na eo aza ny loza voajanahary tato ho ato.
Ekipa iray avy any Los Exploradores ao Trinidad sy Tobago no any Guyana miasa miaraka amin'ny Rainforest Tours mba hampiroborobo ireo toerana roa ireo ho mpizahatany tontolo iainana.
Frank Singh, Tale mpitantana ny Rainforest Tours, dia nanazava ny anton'izany fiaraha-miasa izany. "Tena manandrana mijery ny fomba fiarahan'ny orinasa roa izahay, mba hahasoa ny fizahantany ara-tontolo iainana no tena ezahin'izy ireo jerena ny vokatra ananantsika mandritra ny dia lavitra any Kaieteur; handeha ho any Kaieteur isika rahampitso. Tsy maintsy jerentsika izany ary amin'ny ho avy dia handefa olona ho any Guyana hanao fiakarana mankany Kaieteur isika ary ny mifamadika amin'izany. ”
Ny ekipa dia tarihin'i Dominic Guevara sy ny vadiny Elizabeth izay handany ny andro vitsivitsy any Guyana hijerena maso mialoha ireo vinavina eto. Manantena ihany koa izy ireo hisarika mpizahatany maro kokoa amin'ny fitsidihany manaraka. "Ny ankamaroan'ny nosy any Karaiba Grenada Dominica… dia rava ireo toerana ireo… ka tianay ny hitazomana ireo mpizahatany eto amin'ny faritra," hoy izy.
Dominic Guevara niresaka tamin'ny Departemantan'ny fampahalalam-baovao dia nanambara fa te hiaina fitsangatsanganana hatrany amin'ny riandrano Kaieteur izy. Nihevitra izy fa ny tombony lehibe dia azo avy amin'ny fiaraha-miasa toy izany.
Mandritra izany fotoana izany, Adrian Boodan, mpanao gazety avy any Trinidad Guardian no hiaraka amin'ny ekipa amin'ny diany. Nanoro hevitra izy fa ny firenena toa an'i Guyana sy Trinidad ary Tobago dia mila mampiroborobo ny tenany amin'ny tsenan'ny fizahan-tany any Japon, Eropa ary Amerika Avaratra.
“Raha nahatonga ny mpizahatany hiala ity faritra ity ity rivo-doza ity, nilaza izy fa tsy te ho tonga eto intsony isika. Ny rivo-doza Irma, tranobe mifangaro, tsy afaka miaina toy izany intsony isika. Tsy afaka mitsangatsangana amin'ireo toerana ireo isika. Izany dia satria zatra mandeha amina vondrona nosy iray izy ireo ary betsaka noho izany ny any Karaiba. Toerana lavitra kokoa io. Manana an'i Guyana isika, na dia tsy manana torapasika aza i Guyana, io no loharano-fizahantany ara-tontolo iainana manankarena indrindra amin'ny faritra manontolo ary mino aho fa tsy misy hamidy izany. ”
Lufthansa dia mamoaka entana fanampiana ho any Puerto Rico
Nanoro hevitra ny olom-pirenena amerikana tsy hitsidika an'i Kiobà taorian'ny “fanafihana manokana”